(၂၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ ~ ၀၁ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၉ နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက် ခရီးစဉ်)
Price - 654 USD
28.December.2018 VN.956 Yangon - Hanoi 18:55 21:25
31.December.2018 VN.136 Hanoi - Da Nang 08:00 09:20
01.January.2019 VN.172 Da Nang - Hanoi 13:00 14:20
01.January.2019 VN.957 Hanoi - Yangon 16:30 18:00
Day 1: YANGON-SAIGON-DA NANG
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် Columbus Travels & Tours မှ Tour Leader နှင့် တွေ့ဆုံကာ ညနေ ၀၆း၅၅ နာရီအချိန်တွင် Vietnam Airlines လေယာဉ် VN.956 ဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ ဗီယက်နမ်စံတော်ချိန် ည ၀၉:၂၅ နာရီအချိန်တွင် ဟနွိုင်းလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကာ လေဆိပ်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက် ကြိုဆိုပါမည်။ ထို့နောက် ကြယ်သုံးပွင့် အဆင့်ရှိ May Devilla Hotel (or) Similar3Star Hotel သို့ သွားရောက် Check In ၀င်၍ တစ်ညတာ အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day 2: HOI AN - HALONG BAY
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်း ဖတ်ကြား သည့် Ba Ding Square ၊ ဟိုချီမင်း ရုပ်ကလပ်ထားရှိရာ ဟိုချီမင်းပြတိုက် Ho Chi Min Mausoleum ၊ ကိုလိုနီခေတ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ပြင်သစ်လက်ရာ The Presidential Palace ၊ ဟိုချီမင်းနေထိုင်ခဲ့သော ခြေတံရှည်သစ်သားစံအိမ်လေး House on Stilit ၊ One Pillar Pagoda ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ကွန်ဖြူးရှပ်အဆိုအမိန့်များ သင်ကြားရာ ပထမဦးဆုံးသောတက္ကသိုလ် Temple of Literature ၊ Ngoc Son Temple ၊ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များနှင့် ပြည့်နက်နေသော Hoan Kien Lake ၊ နှစ်သက်တမ်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိနေသော Quoc Pagoda နှင့် West Lake တို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် ယူနက်စကို အသင်းကြီး မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် လှပဆန်း ကျယ်သော လှိုဏ်ဂူ နှင့် ကျွန်းငယ်များရှိရာ Halong Bay ပင်လယ်အော်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာကြပါမည်။ ကားမောင်း ကြာချိန် ၄ နာရီခန့် ကြာပြီးနောက် ဟလောင်ဘေးမြို့သို့ရောက်ရှိကြပါမည်။ ဟလောင်းဘေးသို့ ရောက်လျှင် ကြယ်သုံးပွင့် အဆင့်ရှိ Lang Chai Hotel or Similar Hotel3Star သို့ သွားရောက် Check In ၀င်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Halong Night Market သို့ မိမိ စိတ်ကြိုက် ဈေးဝယ် ထွက်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ် သို့ ပြန်ပြီး တစ်ညတာ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 3: HANOI - DA NANG – BA NA HILL - HOI AN
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် သာယာလှပသည့် ဟလောင်းဘေးအလှကို ခံစားရင်း ဟလောင်းဘေး ပင်လယ်အော်ထဲရှိ Thein Cung Cave နှင့် Dau go grotto တို့သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ ကို Boat ပေါ်တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟနွိုင်းမြို့ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြပါမည်။ ကာမောင်းချိန် ၄ နာရီခန့် ကြာမြင့်ပြီးနောက် ဟနွိုင်းမြို့ သို့ ရောက်ရှိပြီး Ha Noi မြို့ ရှိ အလွန်စည်ကားသည့် Ancitent Street သို့ သွားရောက် ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာ ကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကြယ်သုံးပွင့် အဆင့်ရှိ Santabarbara3Star Hotel (or) Similar Hotel သို့ သွားရောက် Check In ၀င်ပြီး တစ်ညတာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day 4: HANOI - DA NANG – BA NA HILL - HOI AN
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး ဒါနန်းမြို့ (Da Nang) သို့ ထွက်ခွာရန် အတွက် ဟနွိုင်းမြို့ ရှိ Noi Bai လေဆိပ်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာကြပါမည်။ လေဆိပ် သို့ရောက်လျှင် Check in ၀င်ပြီး Airline လေယာဉ် အမှတ် VN.163 ဖြင့် နံနက် ၀၈:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ဒါနန်းမြို့ (Da Nang) သို့ နံနက် ၀၉:၂၀ နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိပြီး ဆက်လက်၍ ရှေးဟောင်းပြင်သစ်ပုံစံ အဆောက်အဦးများဖြင့် ဥရောပမြို့လေးသဖွယ် တည်ရှိနေသော Ba Na Hill တောင်ပေါ်သို့ အာရှ၏ အရှည်ဆုံးသော Cable Car စီး၍ တက်ရောက်ကြပါမည်။ Ba Na Hill တောင်ပေါ်တွင် French Villas ၊ Suspension Bridge ၊ Golden Bridge ၊ Nui Chua နှင့် The Mountain Peak ၊ Vong Nguyet Villa ၊ Linh Ung Pagoda နှင့် Sakyamuni Buddha’s monument ၊ Ba Na တို့တွင် မိမိ စိတ်ကြိုက် ကစားကြပြီး အမှတ်တရဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် တောင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာကာ ရှေးဟောင်းအငွေ့အသက်များ လွှမ်းခြုံရာ ဟွေအန်းမြို့ သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ထို့နောက် ဟွေအန်းမြို့ရှိ ရှေးဟောင်း အဆောက် အအုံပုံစံအိမ်ငယ် လေးများဖြင့် Chinese ၊ Japanese & European စတိုင်လွှမ်းခြုံတည်ရှိနေသော ဟွေအန်းမြို့လေးကို လမ်းလျှောက်၍ လည်ပတ်ကြပါမည်။ ညစာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပါမည်။ ညစာသုံးဆောင် ပြီးနောက် ကြယ်သုံးပွင့် အဆင့်ရှိ Hotel Lantern Hotel or Similar3Star Hotel သို့ Check In ၀င်ကာ ဟွေအန်း မြို့လေး၏ ညအလှကို တစ်ဝကြီးခံစား၍ အိပ်စက်အနား ယူပါမည်။
Day 5: HOI AN – DA NANG – HA NOI - YANGON
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် မိမိ စိတ်ကြိုက် ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ဈေးဝယ်ထွက် လည်ပတ်ကြပြီး နောက် ဟွေအန်းမြို့ မှ ဒါနန်းမြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။ ဒါနန်းမြို့ သို့ရောက်လျှင် နေ့လည်စာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ကြပြီးနောက် ညနေပိုင်းတွင် ဟနွိုင်းမြို့ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် ဒါနန်း လေဆိပ်သို့ သွားရောက်ကြပါမည်။ ဒါနန်းလေဆိပ် သို့ရောက်လျှင် Check in ၀င်ပြီး Vietnam Airlines လေယာဉ် အမှတ် VN.172 ဖြင့် နေ့လည် ၀၁:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ဟနွိုင်းမြို့ သို့ နေ့လည် ၀၂:၂၀ နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် အတွက် Check in ၀င်ပြီး Vietnam Airlines လေယာဉ် အမှတ် VN.957 ဖြင့် ညနေ ၀၄:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ထွက်ခွာကြပါမည်။ ညနေ ၀၆:၀၀ နာရီအချိန် တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် သို့ စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြပါမည်။
၄ည/၅ရက် ဟလောင်းဘေး - ဟနွိုင်း - ဒါနန်း - ဘန်နဟင်လ်း - ဟွေအန်း ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်း
၂၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ ~ ၀၁ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၉ ခရီးစဉ်ဈေးနူန်း
1. လူကြီးတစ်ဦးဈေးနူန်း USD 654 (နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနေလျှင်)
2. ၁၁နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦးဈေးနူန်း USD 654 (အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင် လူကြီးတစ်ဦးနှင့်နေလျှင်)
3. ၁၁နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦးဈေးနူန်း USD 559 (မိဘနှင့်အတူအိပ်လျှင်)
4. တစ်ယောက်ခန်းနေလျှင် USD 709